के संकेत पायो प्रहरीले ? काठमाडौमा यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, बढाइयो सुरक्षा – Hamro24News
July 13, 2021 adminLeaveaComment on के संकेत पायो प्रहरीले ? काठमाडौमा यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, बढाइयो सुरक्षा
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। फैसला पछि उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको आँकलन गर्दै प्रहरीले सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको हो । सर्वोच्चले सोमवार संसद पुनस्थापना गर्दै शेरवहादुर देउवालाई दुई दिन भित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****